Leroy Sane Iyo Gundogan Oo Lagu Bahdilay Garoonka Dhexdiisa, Dalka Turkiga Iyo Qaaradda Afrika Oo La Caayey, Hitler Oo La Amaanay Iyo FADEEXADDII Jamaahiirta Germany Sameeyeen - Cadalool.com
Leroy Sane Iyo Gundogan Oo Lagu Bahdilay Garoonka Dhexdiisa, Dalka Turkiga Iyo Qaaradda Afrika Oo La Caayey, Hitler Oo La Amaanay Iyo FADEEXADDII Jamaahiirta Germany Sameeyeen
Habeen madow ayay u ahayd Ilkay Gundogan iyo Leroy Sane, waxaana aflagaadooyin aan joogsi lahayn u geystay taageereyaasha xulka qaranka ay u ciyaarayeen ee Germany, kuwaas oo aan waxba ula hadhin intii ay garoonka ku jireen.
Labadan ciyaartoy oo u wada ciyaara Manchester City, ayaa dhibbane u noqday aflagaadooyin layaab leh, iyagoo loo sheegay in haddii uu joogi lahaa Hitler in aanay fursad u heleen inay xidhaan shaadhka qaranka Germny.
Gundogan waxa uu asal ahaan kasoo jeedaa waddanka Turkiga, waxaana sannadkii hore uu qaabilay madaxweyne Racep Tayyib Erdogan, halka Sane uu yahay ciyaartoy kasoo jeeda qaaradda Afrika oo ay waalidkiisu tageen Germany.
Haddaba intii ay socotay ciyaartii Germany la yeeshay Serbia toddobaadkii hore, ayaa waxay la kulmeen aflagaadooyin aanay filaynin, iyadoo xattaa wax laga sheegay midabkooda iyo halka ay ka yimaaddeen.
Sida uu qoray wargeyska Daily Mail, Gundogan ayaa lagu caayay hadallo hal-qabsi ah oo isku xidhiidhinayey isaga iyo qoyskiisa ka yimid Turkiga, halka Sane loo adeegsaday ereyo ay ka mid ahaayeen ‘negro.’.
Qayb dhan oo ay taageereyaasha ah ayaa waxay ku heesayeen magaca kali-taliyihii Hitler iyo heesihii Nazi-ga, hase yeeshee ciidamada booliska dalkaas ayaa gacanta ku dhigay saddex qof oo ahaa kuwii abaabulayey cunsuriyadda lagula kacay ciyaarayahannadan.
Warku wuxuu sheegay in xidhiidhka kubadda cagta Germany uu baadhitaan ku samaynayo dhacdadan, isla markaana ay aqoonsan doonaan taageereyaashii iibsaday kuraasta aflagaadada laga samaynayey, ayna si buuxda ugu aqoonsan doonaan shaqsi kasta.
Dhinaca kale, ciyaaryahannadan ayaa la sheegay in xidhiidhku raalligelin ka siiyey wixii dhacay.